Iindaba - Ngaphantsi koqoqosho oluhlaza, iimveliso zokupakisha zeglasi ezinje ngeebhotile zeglasi zinokuba namathuba amatsha
Ngaphantsi koqoqosho oluhlaza, iimveliso zokupakisha zeglasi ezinje ngeebhotile zeglasi zinokuba namathuba amatsha
Okwangoku, "ungcoliseko olumhlophe" luya lusiba ngumcimbi wentlalo oxhalabisayo kwilizwe lonke. Inye okanye zimbini izinto zinokubonwa kuxinzelelo lwelizwe lam elandayo kukhuseleko lokusingqongileyo. Phantsi komceli mngeni omkhulu wokusinda kongcoliseko lomoya, ilizwe lijolise kumbono wophuhliso kuqoqosho oluluhlaza. Amashishini nawo anika ingqalelo ngakumbi kuphuhliso kunye nasekukhuthazeni iimveliso eziluhlaza. Imfuno yentengiso kunye noxanduva kwezentlalo kunye zibelekise iqela lamashishini anoxanduva lokulandela iindlela zemveliso eluhlaza.
Iglasi iyaziqhelanisa neemfuno zentengiso yeglasi yokupakisha kunye nokuhlaza. Ibizwa ngokuba luhlobo olutsha lwezinto zokupakisha ngenxa yokhuseleko lwendalo esingqongileyo, ukuvala umoya kakuhle, ukumelana nobushushu obuphezulu, kunye nokuzala okulula, kwaye inesabelo esithile kwimarike. Kwelinye icala, ngokonyuka kokuqonda kwabahlali ngokhuseleko lokusingqongileyo kunye nolondolozo lwezixhobo, izikhongozeli zokupakisha iglasi ziye ngokuthe ngcembe zaba zizinto zokupakisha ezikhuthazwa ngurhulumente, kunye nokwamkelwa kwabathengi izikhongozeli zokupakisha iglasi nako kuye kwanda.
Isikhongozelo ekuthiwa yiglasi yokupakisha, njengoko igama lisitsho, sisiqulatho esingafihliyo esenziwe ngeglasi etyhidiweyo ngokubetha nokubumba. Xa kuthelekiswa nokupakisha kwendabuko, inezibonelelo zotshintsho lwepropathi encinci, umhlwa olungileyo kunye nokumelana ne-asidi, isithintelo esihle kunye nesiphumo sokutywina, kwaye inokuphinda iveliswe eontini. Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kwiziselo, amayeza kunye nezinye iinkalo. Kwiminyaka yakutshanje, nangona ibango lesikhongozeli sokupakisha iglasi kwintengiso yamanye amazwe libonakalise imeko esezantsi, izikhongozeli zokupakisha iglasi zisakhula ngokukhawuleza malunga nokupakisha kunye nokugcinwa kweentlobo ezahlukeneyo zotywala, isinongo sokutya, izixhobo zamachiza kunye nezinye iimfuno zemihla ngemihla.
Kwinqanaba lesizwe, ngokuqhubela phambili okuqhubekayo "kokulungiswa kwecala lesakhiwo" kunye "nokuqinisa amadabi okhuselo lokusingqongileyo" kunye nokufikelela okungqongqo kushishino, ilizwe lam lisungule umgaqo-nkqubo wofikelelo kusetyenziso lweglasi lwemihla ngemihla ukulawula imveliso , ukusebenza kunye nokuziphatha kotyalo-mali kushishino lokusetyenziswa kweglasi yonke imihla. Ukukhuthaza ukonga umbane, ukunciphisa ukungcola kunye nemveliso ecocekileyo, kwaye ukhokele ishishini lemihla ngemihla ukuba liphuhle libe ngumzi wokonga izixhobo kunye nokusingqongileyo.
Kwinqanaba leemarike, ukulungiselela ukuziqhelanisa nokhuphiswano olukhulu kwimarike yokupakisha yamanye amazwe, abanye abavelisi beekhonteyina zokupakisha iglasi kunye namasebe ophando lwenzululwazi aqhubeka nokwazisa izixhobo ezitsha kunye nokwamkela ubuchwepheshe obutsha, obenze inkqubela phambili enkulu ekwenzeni Izikhongozeli zokupakisha zeglasi. Iziphumo zizonke zokupakisha iglasi zigcina ukukhula okuqhubekayo. Ngokwezibalo ezivela kwiQianzhan.com, ngokukhula kokusetyenziswa kweziselo ezinxilisayo ezahlukeneyo, kulindeleke ukuba imveliso ngo-2018 inyuke iye kwiitoni ezingama-19,703,400.
Ukuthetha ngokujongiweyo, isikali esipheleleyo seshishini lokupakisha iiglasi sisaqhubeka nokukhula, kunye nemveliso yesizwe yezikhongozelo zokupakisha iglasi iyanda ngokukhawuleza. Kufuneka kuqatshelwe ukuba izikhongozeli zeglasi zokupakisha nazo zinazo iintsilelo, kwaye kulula ukuzaphula yenye yeentsilelo. Ke ngoko, isalathiso sokuchasana neebhotile zeglasi kunye neenkonkxa ibe yinto ebalulekileyo yovavanyo.
Ngaphantsi kweemeko ezithile zokuqinisekisa ukomelela kokupakishwa kweglasi, ukunciphisa umlinganiso wobunzima ukuya kumthamo weebhotile zeglasi kukuphucula ukuluhlaza kuqoqosho lwazo. Kwangelo xesha, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kubunzima beepakethe zeglasi. Ibhotile yeglasi yokupakisha ngokukhawuleza ithathe inxaxheba kwinxalenye yentengiso ngothotho lweempawu ezibonakalayo kunye neekhemikhali ezinje ngozinzo lweekhemikhali, ukuqina komoya, ukuguda kunye nokungafihli nto, ukumelana nobushushu obuphezulu, kunye nokubulala iintsholongwane ngokulula kweglasi. Kwixa elizayo, izikhongozeli zeglasi zokupakisha ziya kunyanzeleka zibe nethemba elibanzi lophuhliso.
Ixesha Post: Oct-21-2020
Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo,